Yenza utshintsho intwazana | News24
Yenza utshintsho intwazana
Abafundi bebanga lokuqala besikolo samabanga aphantsi Ikhwezilesizwe, eKhayelitsha, bawongwe ngempahla zesikolo ezintsha kwiveki ephelileyo. IIMFANEKISO: SIYABONGA KALIPA
Ngabafundi abangama 50 kunye nabazali babo abaphuma kwisikolo samabanga aphantsi Ikhwezilesizwe, eKhayelitsha, abathe baxhamla kwizinxibo zesikolo ngethuba igqiyazana uFundisa Lusithi enikezela ngenkxaso.
Oka Lusithi uthe wanikezela ngezi zinxibo ngoLwesihlanu weveki edlulileyo, logama icandelo lezophuhliso loluntu loMzantsi Afrika iSouth Africa Social Security Agency, uSASSA ngamafutshane, ithe yabinza ngokusiwa phantsi kwempumlo
Impahla zesikolo zabafundi beziquka ikawusi, ijezi, izihlangu kwakunye netyhunikhi beziye zaxabisa R9 000.
Abazali bona banikwe umzali ngamnye ukutya okuxabisa iR776 nazakutya nosapho lwakhe.
U-Lusithi, nothe waququzelela lo msitho, unikele ngempahla zesikolo waze uSASSA) wanikela ngokutya.
Umzali, uBongiwe Ankrah, uthe uswele imilomo eliwaka yokwenza umbulelo. Uthe esi sipho sizakuthi sibancede kakhulu belusapho.
“Ndingumzali okhulisa abantwana ndindedwa kwaye andiphangeli oku kutya nale mpahla yesikolo izakundiphungulela umthwalo ngeyona ndlela,” utshilo uAnkrah.
Uqhwabele izandla abantu abathe beza nalo mbono mhle ngale ndlela.
Omnye umzali uMphathi Dosi naye uye wabulela esithi uswele amazwi kuba ebangakulindelanga oko bakufumeneyo.
“Ndibulela kakhulu kusisi nequmrhu lakhe kwakunye nakwisebe lika rhulumente, inga bangenjenje nakwabanye,” utshilo uDosi. U-Lusithi, nongumsebenzi kwinkampani yamafutha yakwa eyaziwayo, uthe uncedwe ngogxa bakhe ekwenzeni lo msebenzi ube yimpumelelo.
U-Lusithi, nokhule wafunda eKhayelitsha, uthe uyayazi ukuba imeko iye ibenjani kwabanye abafundi ngenxa yemizi abasuka kuyo.
“Ndiye ndathatha isigqibo sokuba mandikhuphe epokothweni yam kuba ndisazi ubunzima amanye amakhaya ajongene nabo, kodwa ndiye ndacela ogxa bam ukuba sincedisane,” utshilo uLusithi.
Uthe imali abaye bakwazi ukuyidibanisa nogxa bakhe iye yenza ama R9000, mali leyo abathe bathenga ngayo le mpahla kwakunye nokutya.
Uthe into ebangele ukuba enze oku uyibona imfundo iyinto ebalulekileyo kakhulu.
“Imfundo sisitshixo aba bafundi abanozikhupha kwiimeko abakuzo ngaso. Imeko okuyo namhlanje ayithethi ukuba kuya kubanjalo nakwikamva lakho,” utshilo uLusithi.
Inqununu yesi sikolo uNorma Mayeye uthe ukuhlupheka kwamakhaya abanye abafundi kuye kuchaphazele izifundo zabo. Uthe baye bazibone behlelelekile kunabanye abantwana.
U-Mayeye uthe lento yenzelwe abafundi bakhe izakuba khuthaza kakhulu kwaye bazakutsho babone ukuba bajongiwe kwaye bayathandwa ekuhlaleni.
Wothulele umnqwazi uLusithi kwakunye necandelo lwaka SASSA ngenkxaso yalo.